Umphumela wokuncipha ngokweqile kwemithambo ye-stenotic atherosclerosis. > Isifo sikashukela
I-atherossteosis stenosing: izimpawu nokwelashwa
Lapho unciphisa i-lumen yemithambo ngenxa yokwakheka kwe-atherosulinotic plaque, kutholakala ukuxilongwa kwe-stenosing atherossteosis. Ithinta ngokuyinhloko imikhumbi ye-coronary, i-peripheral and cerebral, okuholela ku-ischemia yezicubu. Ukubonakaliswa kwemitholampilo yilezi: i-angina pectoris, i-discepulopet encephalopathy, ukucacisa okuthile ngezikhathi ezithile.
Ukwelashwa, kusetshenziswa izidakamizwa ezisehlisa i-cholesterol yegazi, ama-antiplatelet agents nama-vasodilators.
Izimbangela ze-stenosing atherossteosis
Naphezu kweqiniso lokuthi indima yezici eziningi ekwakhiweni kwe-atherosulinosis ibhekwa njengekufakazelwe ngokuphelele, lesi sifo asiqondakali ngokuphelele. Kuze kube manje, akukwazanga ukuthola isizathu esenza ukuthi i-stenotic atherosclerosis kwezinye iziguli ithinte inhliziyo, nakwezinye izinto zemithambo noma izingqondo. Futhi abukho ubunye ekunqumeni umphumela ovuselelayo, emva kwalokho ukuqhubekela phambili ngokushesha kwezimpawu zesifo kuqala.
Umbono ojwayelekile phakathi kososayensi uyabonakala lapho kukhomba izimo lapho ubungozi bomonakalo odongeni lwasemandulo bukhuphuka kaningi. Lokhu kufaka phakathi:
umlutha wotshwala nicotine,
cholesterol ngokweqile ekudleni,
ukwephulwa kwesilinganiso sezingxenyana ze-cholesterol,
Lapho kuhlanganiswa izinto eziningana esigulini esisodwa, inqubo yokuvalwa kwemithambo yemithambo iqala isencane kakhulu, iba nzima futhi ihambisana nezinkinga - ukushaya kwenhliziyo, unhlangothi, i-gangren yezitho.
Futhi nakhu okwengeziwe nge-atherosclerosis yemikhumbi yentamo.
Incazelo yesifo kanye nendlela yokuthuthuka
I-Stenosing atherosclerosis inqubo yokugula ebhebhetheka iye emithanjeni eyinhloko yomzimba. Indlela esebenza ngayo ilula impela. Ngaphansi kwethonya lezinto ezithile, Amafutha amahhala (cholesterol) aqala ukufakwa ezindongeni zemithambo yegazi nefomu lesigcwagcwa. Lesi sifo sihamba ngezigaba eziningana zokuthuthuka, isigaba sokugcina ukushiswa kwe-artery kuya ubuncane (i-stenosis). Ngenxa yalokhu, izicubu nezitho zomzimba ezixhomeke esizeni sokuhlinzekelwa kwegazi okungenampilo azinawo umoya-mpilo kanye nezakhi zomzimba.
Inkinga yokwanda kwama-cholesterol plaque nezicubu ezixhumayo phakathi kwawo kuthinta imithambo yemithambo emikhulu emikhulu. Ngokubheka indawo yentuthuko yenqubo ye-pathological, izinhlobo eziningana zesifo ziyahlukaniswa. Okusengozini kakhulu yimithambo yegazi esezingeni eliphansi, ubuchopho kanye ne-coronary aorta yenhliziyo. Ukuntuleka kokwelashwa okufika ngesikhathi kuvame ukuholela emiphumeleni engenakuphikwa: ukufakwa kwe-myocardial, i-leg gangrene, unhlangothi, i-thromboembolism ngomonakalo wezitho zangaphakathi.
Ukuthuthukiswa kwezilonda ezihlasela imithambo yegazi emithanjeni emikhulu kungenxa yezici ezintathu:
Ukwephula umzimba we-fat metabolism. Lapho i-cholesterol synthesis kanye nohlelo lokuhamba lwehluleka emzimbeni, ukugcwala kwalokhu kuqalwa kufakwa ezindongeni zemithambo yegazi. I-trigger mechanism ingaba yizifo ezithile, ukudla okungalinganiseli kanye nokukhuluphala.
Isisulu sokuqothuka. Uma i-stenosing atherosclerosis itholakele ezihlotsheni eziseduze, amathuba alesi sifo akhuphuka kaningana.
Kwehliswe ukuqina kwezindonga zemithambo. Ama-cholesterol plaques awakwazi ukwakha endaweni ebushelelezi nenempilo. Lokhu kuphazamiseka okulandelayo kunomthelela odongeni lomsipha: isifo sikashukela, indlela yokuphila yokuhlala nokuhlala, nokubhema.
Uma unesici esisodwa noma eziningi ezibalwe ngenhla, udinga ukunaka impilo yakho, uvame ukuvivinywa.
Ukuvezwa kwe-stenosis yemithambo yobuchopho
Imithambo ye-brachiocephalic yimikhumbi emikhulu esuka ku-arch eqonde ebuchosheni. Amafomu abo amaningi afaka umjikelezo we-Willis. Inikeza ukulethwa kwegazi eliphelele ebuchosheni.
Lapho isithiyo ngesimo se-plaque ye-atherosulinotic sakhiwa kwenye yezingxenye zombuthano weWillis, umuntu ukhuluma ngokuthuthukiswa kwe-stenosis. Lesi sifo sithinta ukusebenza kwalo lonke uhlelo lokuhlinzeka ngegazi lobuchopho. Ukuntuleka kokwelashwa okufika ngesikhathi kungaholela ku-hypoxia noma unhlangothi. Izimpawu zenqubo ye-pathological incike kunani lamathafa we-atherosulinotic embhedeni we-arterial.
Ekuqaleni, lesi sifo sikhona njenge-asymptomatic. Uma i-lumen yomkhumbi ivinjiwe yi-plaque ngo-50% noma ngaphezulu, isiguli singabona ukuvela kokuphazamiseka kwe-uncharacteristic. Phakathi kwazo kukhona:
isiyezi ngezikhathi ezithile ngokwehla komfutho wegazi,
ubunzima bomzwelo obukhulu bokucabanga komoya ophansi,
Izinkinga ezibukwayo (i-tinnitus, ukulahleka kwezindlebe, ukubukeka kwezimpukane phambi kwamehlo),
isifo sokukhathala okungamahlalakhona
Izimpawu ezisohlwini ekuqaleni empeleni azithinti ikhwalithi yempilo. Iziguli eziningi zimane nje zingazinaki. I-Progressive stenosing atherosclerosis yemithambo ye-brachiocephalic ikwenza ufune usizo kudokotela.
Ukuboniswa kwe-stenosis yemikhumbi yenhliziyo
I-oksijini nezakhi zingena enhliziyweni ngemithambo yegazi. Ukwehlulwa kwale mikhumbi yi-atherosclerosis kubeka engcupheni enkulu emisipha eyikhulu yomzimba, kuthinte isigqi sayo nokuphelela kwezivumelwano. Ngalesi sifo, iziguli zivame ukukhononda ngobuhlungu ku-sternum. Okokuqala avele ngemuva kokuzivocavoca ngokomzimba noma ukucindezela. Ngokuhamba kwesikhathi, ukungakhululeki akushiyi umuntu, noma aphumule. Isikhathi sokuhlaselwa kobuhlungu cishe imizuzu engama-30.
Ukubonakaliswa okunamandla kwenqubo ye-pathological infarction ye-myocardial. Lesi sifo sihambisana nobuhlungu obukhulu enhliziyweni, obungamiswa nethebhulethi yaseNitroglycerin. Umfutho wegazi wehla, okuholela enesiyezi, ebuthakathakeni. I-atherossteosis stenosing, ethinta imithambo ye-coronary, kungaholela ezinkingeni ezinkulu. Lokhu kufaka i-aneurysm yenhliziyo, ukushaqeka kwe-cardiogenic, nokuqhuma komsipha uqobo. Imvamisa, odokotela baxilonga ukufa kwesifo okungazelelwe.
Ukubonakaliswa kwe-stenosis yama-artery emikhawulweni ephansi
Ngokuhamba kwe-femoral artery, igazi ligeleza liye ezindaweni eziphelele kakhulu zomzimba, ezisezinyaweni. I-stherosing atherosclerosis yamaphethelo aphansi ithatha indawo yesithathu imvamisa yokwenzeka. Ukubonakaliswa kwemitholampilo kwalolu hlobo lwalesi sifo kuyahlukahluka. Ngakho-ke, kungakuhle ukuthi ucabangele ukuthuthukiswa kwenqubo ye-pathological ngezigaba:
Esigabeni sokuqala, isiguli siphazanyiswa umuzwa wokuba msulwa, ukuvutha noma ukudinwa ezinyaweni. Isikhumba emilenzeni siyashintsha kube mnyama.
Isigaba sesibili sibonisa ngokuvela kokwehlukanisa okuthile ngezikhathi ezithile. Isitho esisodwa, lapho sihamba noma sidlala imidlalo, siqala ukukhathala ngaphambili kunesinye. Kancane kancane, imizwa engathandeki ikhula endaweni yemisipha yethole, i-cyanosis ephikelelayo ivele.
Esigabeni esilandelayo, umfutho wokudluliselwa kwemibono ngezikhathi ezithile uyakhula ngokubonakalayo. Kuba nzima ukuthi isiguli sihambe ngendlela ejwayelekile singayeki. Imvamisa iziguli zikhononda ngobuhlungu ezinzwaneni, obungapheli ekuphumuleni. Isikhumba onyaweni sithola i-hue ebunjiwe, ingaqhekeka futhi ibe mncane.
Esigabeni sesine, i-lameness ibalelwa kakhulu kuze kube yilapho umuntu ephoqeleka ukuba ame ngezinyathelo ezingama-50 zendlela. Ukuvela kwezilonda ezinamahlwili, ukuvuvukala. Ubuhlungu obukhulu bomlenze buphazamisa ukuphumula ebusuku.
Awukwazi ukulinda imiphumela engenakuphikwa yesifo ngesimo se-gangrene. Uma ngabe kuvela izimpawu zokuphazamiseka kwegazi emilenzeni (ubuthakathaka, ukukhumuzeka ngezikhathi ezithile), kufanele uthintane nodokotela ngokushesha. Uma uchwepheshe eqinisekisa i-stenotic atherosulinosis yemithambo yemikhawulo engezansi, ukwelashwa kuyonqunywa ngokushesha.
Isimo se-non-stenotic atherosclerosis yemikhumbi ye-brachiocephalic
I-Atherossteosis ithinta ngokuyinhloko imikhumbi emikhulu yohlobo lwemisipha-elastic. Phakathi kwale mithambo yegazi, i-BCS (imikhumbi ye-brachiocephalic), imithambo yemikhawulo ephezulu nangaphansi, intamo nekhanda kungahlukaniswa. Imishini ngayinye inesibopho sokuhlinzekelwa kwegazi engxenyeni ethile yomzimba kanti nezimpawu ezibonakaliswa yi-stenosis zizoba ngokuhambelana nendawo.
I-non-stenotic atherosulinosis ye-brachiocephalic artery (BCA) imbi ekubonakalisweni komtholampilo, ingahle ibe yi-asymptomatic noma inganikeli zimpawu ezithile zesifo. Le nkambo ihlotshaniswa nokukhula kwama-plaque ekuqondisweni kobude besikejana, futhi lapho kukhona khona i-atherosclerosis yemikhumbi ye-brachiocephalic, kwakheka i-cholesterol plaque kuyo yonke imithambo yethambo, ngaleyo ndlela kuvalwe ukukhanya kwayo okuzozungeza yonke indawo. I-non-stenotic atherosulinosis yezingxenye ezingaphandle kwe-extracranial iholela kuphela ekuphazanyisweni okuncane kwe-hemodynamic, kulondoloze ukuphuma kwegazi ezithweni.
I-stherosing atherosclerosis yesiqu se-brachiocephalic kanye namagatsha awo
I-stenosing atherosclerosis yemithambo ye-brachiocephalic kwenzeka lapho i-plaque idlula isibani se-brachiocephalic trunk. Ukuze uqonde umgomo wokuthuthukiswa kwezimpawu, udinga ukwazi indawo ephezulu yemithambo yegazi. I-arachi ye-brachiocephalic kuqala ishiya i-arch ye-aortic, inobude obungu-4 cm, iya kwesokudla bese idlula ngemuva kwesihlanganisi se-sternoclavicular, lapho ihlukaniswe khona ngamagatsha ayo okugcina:
I-artery ejwayelekile ye-carotid.
Umthambo we-subclavian wesokudla.
I-artery ye-vertebral artery, okuyiigatsha lomthambo we-subclavian artery.
Ukuphazamiseka Okujikelezayo KweLimbane Eliphezulu
I-atherosclerosis yemikhumbi ye-brachiocephalic ihambisana nokuphazamiseka kokujikeleza kwesilonda sakho sangaphezulu kwesokudla. Ukunikezwa kwegazi esandleni kuklanyelwe ukuze kungabi nokujikeleza kwegazi okuhambisanayo. Umthambo we-subclavian ofanele ungowokuqala ekunikezelweni kwegazi esandleni, kodwa ngenxa yesinxephezelo segazi kusuka kwamanye amagatsha esiqu, inqubo ye-ischemia iqala kancane.
Ekuqaleni, ngenxa ye-atherosulinosis yemithambo ye-brachiocephalic, ingalo iba phuzi, izinzwa ziyakhubazeka, kuvela ama-paresthesias, khona-ke ukushaya kwenhliziyo kuyanyamalala emthanjeni ofanele we-radial, i-hairline iyanyamalala, izicubu zomzimba ziba buthaka, kepha izimpawu zihamba kancane, kaningi ngesikhathi sokuzivocavoca komzimba.
Ngaphezu kwalokho, i-stherosing atherosclerosis yengxenye engaphandle kwesikhumba ihambisana nokwakhiwa kwezilonda ezisesicubu sezandla ezandleni, i-necrosis yeminwe nalo lonke ilunga. Uma i-arcia efanelekile ye-subclavian ilimele, i-failing kanye nesiyezi, inciphisa umbono, ikhanda, ngenxa yesimpawu sokubamba kobumbumbulu okwenzeka lapho kuphendulwa i-ischemia yomlenze ophakeme.
Ukuphazamiseka kokujikeleza emithanjeni yentamo nekhanda
I-atherossteosis yemithambo eyinhloko yentamo yenzeka ngomonakalo we-carotid artery, kanye namagatsha ayo angaphakathi nangaphandle. Uma unikezwe ukuthi kwasendaweni enjalo ama-cholesterol plaque, ukuhanjiswa kwegazi ebusweni nasengqondweni kuyaphazamiseka, izimpawu zizoba ezifanele. Ukuzwela kwengxenye yesokunene sobuso kuyanyamalala, kuvela imizwa ethi "goosebumps" ezinwabuzelayo.
I-atherosulinosis yezingxenye ezingezona zemithambo eyinhloko yekhanda nentamo ayiholeli ezinkingeni ezinzima zokuqubuka kolwelwesi, kuphela ukuhlaselwa kwesikhashana kwe-ischemic, kuhambisana nekhanda nesiyezi. Ngenxa yokuthi ukujikeleza kwegazi kulezi zingxenye ezingenhla kwenzelwa i-carotid artery engakwesobunxele, okungaxhomekeki kwi-stenosing atherosclerosis yemithambo ye-brachiocephalic, ukuntuleka kokuqina kwento evelayo ayenzeki.
Izingxenye zesobunxele ngombuthano weWillis zinxephezela kancane ukuphazamiseka kwe-hemodynamic kusuka engxenyeni yangakwesokudla. Isimpawu esiyingozi ukuncipha okuqhubekayo komqondo, okuholela ekungaboni, lokhu kukhombisa ukwephulwa kwesinxephezelo sokujikeleza kwegazi ohlelweni lwemithambo ye-carotid.
Ukuphazamiseka kwesekhula emithanjeni ye-vertebral
I-atherosulinosis yokwahlukana kwe-extracranial yemithambo ye-brachiocephalic ne-stenosis nayo kukhuluma ngemikhumbi ye-vertebral. Le ngxenye inikezela izingxenye ezingemuva zekhanda nentamo, ngenkathi kunengxenye engaphakathi kule mithambo yegazi, enendlela yayo yokubumbana (umbuthano weZakharchenko), engakhulumi nohlelo lomjikelezo weWillis.
I-atherosulinosis yemithambo yemithambo eyinhloko evela ezingxenyeni ze-vertebral ihambisana nokuxhumanisa okungahambi kahle, ukunyakaza kube kungahambisani (i-cerebellar ataxia), ukuhamba kungangabazi, isiguli singawa siphume eblue. Ngokuvalwa ngokuphelele kwemikhumbi emibili ye-vertebral, isiguli siqala ukuphazamiseka okukhulu kokusebenza kwe-cerebellum ne-occipital cortex, isiguli ngeke sikwazi ukuhlala futhi singalahlekelwa ngokuphelele umbono waso. Umphumela walesi sifo uzoba ukuhlaselwa ischemic kwesifunda se-occipital yobuchopho.
I-atherosclerosis yemikhumbi eyinhloko yobuchopho evela ohlelweni lwe-carotid artery yindawo eyingozi kakhulu ethinteka kuma-cholesterol plaques. Uma ingxenye ethintekile itholakala ngaphezu kombuthano weWillis, khona-ke ngokuqhekeka komkhumbi ngaphezulu kwama-70% kukhona amathuba amakhulu okushiswa kwe-ischemic endaweni yokunikezwa kwegazi.
Uma kwenzeka kuphazamiseka ukuhamba kokujikeleza kwe-frontbe lobe, ehambelana ne-anterior cerebral artery, isiguli siphulukana namandla okunyakaza, izinkulumo kanye nemisebenzi yokomzwelo iyaphazamiseka, amandla okuqonda (okuqondayo) anyamalala ngokuphelele, kuvela ubuthi be-pathological.
Uma kwenzeka kuphazamiseka ukuhamba kokujikeleza kwe-parietal lobe, ehambelana nomthambo we-cerebral artery, isiguli asiboni ukubonwa komzimba wakhe, sidida izinhlangothi zesokudla nesobunxele, asikwazi ukubona nokuchaza izinto, siphulukana ngokuphelele nokuzwela okujulile nokwedlulele.
Uma kwenzeka kuphazamiseka ukuhamba kokujikeleza kwe-lobe yesikhashana evela emthanjeni ovuthayo osezingeni eliphakathi nendawo, isiguli siphelelwa amandla okuzwa nokuhlukanisa imisindo.
I-Atherosclerotic lesion yemithambo yenhliziyo
I-Stenosing atherosulinosis yamathambo e-coronary ihambisana nokuhlaselwa i-angina, kunengozi enkulu yokufakelwa kwe-myocardial. Ukutholwa kwendawo yamathafa e-atherosselotic emithanjeni yenhliziyo uqobo kuyingozi, ngoba ubukhulu be-lumen yabo buncane futhi ukuqedelwa komkhumbi okuphelele kukhula ngokushesha okukhulu.
I-vascular stenosis yamaphethelo aphansi
I-stherosing atherosulinosis yemithambo yethambo elingaphansi inezimpawu ezifanayo nezisemaphethelweni aphezulu. Ezigabeni zokuqala, kuphazamiseka ukuzwela nokushisa kwamalunga. Kube sekuvela uphawu lwe-pathognomic for the plaques asemikhunjini yemikhawulo engezansi, kuwukushintshana ngokushintshana, okukhonjiswa ngeminjunju ebuhlungu emilenzeni, ivele ngokumelene nesizinda sokuhamba nokunyamalala lapho ume futhi uphumula.
Ngezindlela ezisezingeni eliphakeme zesifo, kwenzeka i-fascial musical edema, ephenduka ibe ukuphazamiseka kwengqondo yemikhawulo, nokusongela ngokuqunjelwa.
Ukuxilongwa kwe-Ultrasound kwe-non-stenotic ne-stenosing atherosclerosis
Ukuxilonga isifo usebenzisa i-ultrasound diagnostics.Izimpawu ze-echographic ze-non-stenotic atherossteosis zibonakala kahle ngokuskena kwe-triplex. Ilungiselelo elide le-cholesterol plaque liyaphawuleka, izinga lokugeleza kwegazi lincishiswa kancane, ukujikeleza kwegazi ngokubambisana kuthuthukiswa futhi kunikeze ama-hemodynamics amahle kwizicubu.
Izimpawu ze-echographic ze-stenosing atherossteosis zibonisa ngokucacile. Indawo eguqukayo ye-plaque ihlanganisa ukukhanyisela komkhumbi ngamaphesenti angaphezu kwama-70, izinga lokugeleza kwegazi lincishiswa kakhulu, ukujikeleza kwegazi engxenyeni kuhlinzekwa yimithambo yemithambo yegazi kungcono kuneyokuqala.
I-atherossteosis ene-stenosis futhi ngaphandle kwayo: uyini umehluko nokuthi ungasenza kanjani isifo?
Inqubo isuselwa ekwakhekeni kwe-atherosulinotic plaque, eyenzeka lapho lezi zigaba zokwakheka zishintsha:
ibala lamafutha (lipid),
Njengomphumela wokubekelwa phansi kwengozi (ukuhlukumezeka, ukulimala), kwethulwa umkhondo olandelayo wokuphendula:
ulceration we-plaque cap, kulandelwa ukunamathela kwe-platelet kanye nokwakheka kwe-thrombosis, okuholela ekwandiseni ukuncipha komthambo,
ukuncipha kwethayi nokuqina okuncane ngenxa yalokhu,
amafomu we-necrosis ngaphansi kwe-plaque futhi kukhula i-aneurysm (vasodilation).
Imiphumela yakho konke okungenhla ingaba yilezi:
Ngokusho kwe-European Society of Cardiology, izici eziyingozi ezinkulu zibandakanya:
Ukudla okunamafutha aphezulu
ukunyuka kwe-cholesterol, triglycerides, lipoproteins ephansi egazini,
ukusweleka okukhulu kwe-lipoprotein ephezulu egazini,
izifo eziholela ekunciphiseni kokuqina kwezindonga zemithambo yegazi noma ezihambisana nezinqubo zokuvuvukala kuzo,
izinga eliphakeme C - amaprotheni asebenzayo egazini,
kusengaphambili ifa lesifo.
Manje sizocabanga umehluko phakathi kwe-stenosing kanye ne-non-stenotic atherosclerosis usebenzisa isibonelo semithambo yemilenze ephansi, ngoba le magama asetshenziswa kakhulu kubo.
Uma i-lumen yomkhumbi ingaphezulu kwe-50% egcwele, sikhuluma nge-stenosis, uma kungaphansi kwama-50%, akunjalo.
Umehluko wezimpawu nokuhlolwa kwesiguli
Owokuqala uwukuqagela: ubuhlungu bomlenze buba khona lapho uhamba amabanga amade noma ukuzikhandla okukhulu ngokomzimba.
Owesibili - izinhlungu zenzeka lapho umboza ibanga lamamitha angama-250-1000.
Okwesithathu: izinhlungu zibonakala lapho kudlula amamitha angama-50-100.
Okwesine: izilonda, i-gangrene zingakheka, ubuhlungu obukhulu emilenzeni buyaphazamisa ngisho nasekuphumuleni.
Ngokusekelwe ezicini ze-anatomical, lezi zigaba ezimbili zokuqala zibonisa ukungahambisani ne-stenotic, futhi izigaba ezimbili zokugcina zihambisana ne-stenotic atherosclerosis yamaphethelo aphansi, ngoba ngesikhathi sokuncipha kwengxenye engaphezu kwesigamu ye-lumen kuzovela ezinye izimpawu, esizocubungula ngezansi.
Izikhalazo ezijwayelekile zesiguli
Emazingeni okuqala esifo, iziguli, njengomthetho, azikhombisi izikhalazo, noma iziguli azizikhapheli izimpawu.
Izici eziphambili zifaka:
Ubuhlungu okhalweni, amabhuthi, emuva emuva, izicubu zamathole,
ubuhlungu obukhulu ngesikhathi sokuzivocavoca komzimba,
ukupholisa isikhumba emilenzeni,
umuzwa wokukhathazeka emilenzeni, "ukukhasa okukhasa", ukuhwaqa,
ukucwilisa isikhumba (pallor),
ukugoba emisipha yemikhawulo engezansi,
ukuluma, ukudonsa kwesikhumba semilenze,
ukuqina kwamazipho nesikhumba sezinyawo,
imifantu, ukulahleka kwezinwele emilenzeni.
Izindlela zokuhlola ezidingekayo ekuxilongeni:
Ukwanda kwengcindezi yegazi ye-systolic (BP), kuyilapho i-diastolic inganyuki.
Isikhumba sezinyawo, ikakhulukazi izinyawo, siyabanda uma sithintwa.
Ukuhlolwa kwegazi kwe: cholesterol, triglycerides, low density lipoproteins - kukhuphukile, ama-lipoprotein aphezulu kwabantu - ancishisiwe.
Ukusindeka kwe-pulsation emithanjeni eyinhloko yemilenze.
I-Doppler ultrasound. Izimpawu ze-echographic ze-pathology: ukuba khona nosayizi wokuqonda kwama-plaque, ukunciphisa ukuhamba kwegazi emithanjeni, ukulimala kwabo nokulimala kodonga.
I-Angiography - ukuncipha okubonakalayo kwemikhumbi (kuze kufike ku-50% we-lumen).
I-computer tomography nayo inamandla okuthola zonke lezi zinguquko ezingenhla.
Esigulini ngasinye, ukwelashwa kukhethwa ngakunye, kepha ngokuyisisekelo kufaka:
Statins: simvastatin, atorvastatin, rosuvastatin (lapho kungekho contraindication).
Izidakamizwa zeVasodilating (antispasmodics): i-nitrate, i-papaverine, i-dibazole.
Ngokuvimbela i-thrombosis: ama-antiplatelet agents - ama-aspirin, ama-chimes, ama-clopidogrel, ama-anticoagulants - i-warfarin, i-rivaroxaban, i-dabigatran.
Ukulungiselela amavithamini nama-antioxidants.
Indlela yokuphila enempilo ehlose ukunciphisa isisindo.
Ukulawulwa kwengcindezi yegazi - akunconywa ukuvumela ukwanda komfutho wegazi we-systolic ngenhla kwe-140 mmHg.
Izifundo zomzimba, ukubhukuda, ukuzivocavoca ibhayisikile.
Ukwelashwa kwezifo ezingamahlalakhona.
Ukwenqaba utshwala, ukubhema, ukusetshenziswa ngokweqile kwekofi netiye.
Ukufakwa ngaphandle kwamafutha ezilwane nosawoti, ukukhuphuka kwenani lezithelo nemifino ekudleni.
Isikhathi sokulashwa kwezidakamizwa izinyanga eziyi-1.5 kuya kwezingu-2. Phinda isifundo izikhathi ezine ngonyaka.
I-stherosing atherosclerosis yemithambo eyinhloko yamaphethelo aphansi
I-Pathology ibonakala ngazo zonke izinkomba zefomu yangaphambilini ngaphandle kwesimo sokulumba, ezichazwe ngenhla, kanye nezinye izimpawu ezengeziwe zokuqina kwe-stenosing atherosclerosis:
i-lameness (okokuqala uma uhamba amabanga amade, futhi ekugcineni ngamabanga amafushane),
ubomvu nokupholisa kwezinyawo,
Ubuhlungu emisipha yamathole, amancanyana, okhalweni kanye nokwenyuka okuphansi emuva (kwenzeka ngisho nasebusuku nakuphumula),
Isici esihlukile salesi simo ukuthi ukuncipha kwe-lumen yemikhumbi kuzoba ngaphezu kwama-50%, futhi isimo sodonga sibi kakhulu. Lokhu kungabonakala ku-angiography, i-dopplerography ye-ultrasound (ukuphuma kwegazi kuncishisiwe kune-non-stenotic, noma ngokuvamile kumisiwe), i-compact tomography. Ukuhlolwa kwenhloso kokungabikho kwe-pulsation emithanjeni eyinhloko, ukuvuvukala, izilonda, i-gangrene.
Ukunikeza usizo lwezokwelapha esigulini, zonke izindlela zokulondolozwa ezichazwe ngenhla ziyasetshenziswa ezisetshenziselwa i-non-stenotic atherossteosis.
Odokotela bavame ukusebenzisa izindlela zokwelapha isiguli ngezindlela zokuhlinza:
Ukuqina kwamathambo athintekile (asetshenziswa kabanzi ku-coronary sclerosis)
Ama-Prosthetics engxenye yomkhumbi owonakele. Izinto zokwenziwa ezisetshenzisiwe
Ukuhlinzwa kweBypass kudalwa komsele okwenziwe ngokungemthetho, kudlula ingxenye yomthambo ongasebenzi.
I-Thrombendarterectomy - ukususwa kwe-plaque ngaphakathi komkhumbi.
Ukuqunjelwa (ukunqunywa kwengxenye yesitho esisemalungwini) esimweni se-gangrene.
Njengoba sibona, i-prognosis yokutakula ayisiyisiyaluyalu ngendlela ebesingathanda ngayo, ngoba lesi sifo sivame ukuholela ekukhubazekeni. Uma ukuhlinzwa kwenziwa ngesikhathi, lapho-ke ungasindisa umlenze nokusebenza kwawo, kepha ngeke kwenzeke ukukubuyisela ngokuphelele.
Ngokulashwa okungafanele, le ndlela yokudla ngezifo ingaba nezimpawu ezinzima. Zonke iziguli ezisendaweni “yobungozi” (futhi lokhu kungumlando womndeni, imikhuba emibi nezinye izikhathi), kunconyelwa kakhulu ukulungisa ithonya lezinto ezingezinhle ukuze kukhuliswe ikhwalithi nokuphila isikhathi eside.
Izimpawu ze-stenosing atherossteosis zixhomeke ngqo endaweni okukhona kuyo isifo futhi kulula ukusithola, ngoba igazi lijikeleza emzimbeni wonke futhi uma kunenkinga enjalo, ukwakheka kwalo kuzobandakanya izinhlayiya ezakha i-plaque. Ngokuqondene nokuqina, ezindaweni ezahlukahlukene kungavezwa ngezinga elikhulu noma elincane.
Uma lesi sifo sithinte imithambo yemikhawulo engezansi, izimpawu zizobe sezisendaweni emilenzeni. Ekuqaleni, umuntu angazizwa ekhathazekile, aqaqambe futhi abe nomuzwa wokukhathazeka. Ukuphazamiseka kwemisebenzi kuvela njengoba isimo siba sibi kakhulu. I-Slight lameness ingahlala unomphela. Uma ungathathi noma yiziphi izinyathelo, kuzovela izilonda ze-atrophic, ukuvuvukala nobomvu bezinyawo. Izimpawu ze-gangrene zibonisa isigaba sokufa.
Izimpawu ze-Neurological zisikisela i-atherosulinosis yemithambo ye-carotid, ebonakala ngokukhanda ikhanda, ukukhathala, izinkinga zokubona kwe-organic kanye nokulahleka kwememori. Ukuphazamiseka kokujikeleza esimweni esinjalo kuvezwa yizinkinga zokucaca kwenkulumo kanye ne-asymmetry yemisipha yobuso.
Izimpawu ze-atherosclerosis zamarithoni e-brachiocephalic zivezwa kabanzi futhi zichazwe kabanzi, ngoba ngenxa yendawo okwenzeka kuyo i-brachiocephalic artery kusistimu yomgogodla, i-lesion ingaba zombili i-atherosulinotic kanye ne-mechanical.
Izimpawu ezivame kakhulu zifanekiswa isicanucanu nesiyezi, okuthi uma uguqula ikhanda, uqinise kuphela.
Ukuthola indawo inkinga, kwanele ukuhlaziya izimpawu. Ukungakhululeki emilenzeni kukhombisa i-stenotic atherosulinosis yemithambo yemikhawulo engezansi, izimpawu zemizwa kungukuqala kwesifo sokuqaqamba kwemithambo eyinhloko yekhanda, kanti nomsebenzi we-cardiac ongasebenzi kahle ukhombisa ukuqina kwemithambo yegazi emithanjeni ye-coronary.
Ukuhlolwa kwe-Ultrasound duplex kukuvumela ukunquma ukulimala kwemithambo eyinhloko, kuyilapho ukuhlolwa kwe-Doppler okungeziwe kuzokhombisa i-atherosulinosis yemithambo ye-brachiocephalic, uma ikhona. Ngokuya ngemiphumela ye-Ultra, udokotela ohambelayo ukhetha amaqhinga wokuhlinza noma wezidakamizwa, kuyilapho ucwaningo lweDoppler luthola ukutholwa kwasendaweni, izinga lokunciphisa, kanye nokuqondiswa kokugeleza kwegazi nokushesha kwalo.
Ukwelashwa kwe-pathology okukhulunywa ngayo kukhethiwe ngokuya ngendawo yayo. Lapho kukhona i-stenosing atherosulinosis yemithambo ye-brachiocephalic, kubaluleke kakhulu ukunquma isigaba salesi sifo. Ukwelashwa kuncike esimweni esivamile sesiguli, kanye nanoma yikuphi ukuphambuka nezimpawu. Imithi yokunciphisa umfutho wegazi inqunyelwe phambi kwe-gxuma. Lokhu kunomthelela ekuvinjelweni okuningana kwezinto ezingezinhle emikhunjini emincane nemithambo ye-carotid. Imibhede ihlala iyingxenye yokuvuselela ukwehlisa i-cholesterol. Ukudla kufanele kube ukudla okungekho ngokuphelele ngokuqukethwe okuphezulu kwe-cholesterol noma usawoti.
Inqubo ye-carotid endarterectomy ibalulekile uma ukwelashwa kufanele kuqondiswe enkingeni emithanjeni ye-carotid. Uma kuthinteka imithambo eyinhloko yekhanda, kungahle kube nokushoda kokhokho futhi indlela yokungenelela okuhlinzekwa okuvikelekile ingavimba leyo nkinga. I-longitudinal arteriotomy ingasetshenziswa ukususa i-plaque kusuka ku-lumen ye-artery.
Ngomonakalo emithanjeni yemilenze ephansi, kunzima ukulungisa lesi simo, ngoba impumelelo yokwelashwa ixhomeke ngqo esikhathini sokuqunjelwa nokuqina kobunzima. I-Hypothermia kanye nokugcwala ngokweqile komzimba kufanele kugwenywe ngokucophelela, isimo esibalulekile ukugcinwa kokudla okufanele, okubandakanya imikhiqizo yobisi nemifino. Amaminerali kanye namavithamini kumele ahlinzekwe ngenani elanele, ngakho-ke udokotela unquma ukwelashwa kwe-vitamin okuthuthukisiwe.
Ukuqedwa kwama-sclerotic plaque kufanele kuhlanganiswe nokwelashwa kwe-thromboembolism, ngakho-ke iziguli zivame ukunqunyelwa ama-anticoagulants, ngesikhathi lapho kudingekile ukulawula ukuqina kwegazi.
Izindlela zokuvimbela zifaka lezi zimo ezilandelayo:
ukuhlolwa okujwayelekile kokuvimbela, ikakhulukazi uma kukhona i-pathology emndenini,
umsebenzi ojwayelekile womzimba,
ukulawula umfutho wegazi,
ukwenqaba ngokuphelele imikhuba emibi ngendlela yotshwala, izidakamizwa noma ukubhema.
Noma esemncane, kubalulekile ukuqala ukunamathela kulezimiso ukuze uvimbele ukukhula kwesifo ngokuphelele noma okungenani kunciphise ukudonsa kwezimpawu uma kuguliswa umuntu osemdala noma osemdala.
Ukuze kutholakale lesi sifo ngesikhathi futhi siqale ukwelashwa kwaso, bonke abantu abaneminyaka engama-40 ubudala banconywa odokotela ukuba bahlolwe njalo ngonyaka. Kwanele ukuthatha ukuhlolwa kwegazi kwezinkomba ezilandelayo:
Lezi zinhlaka zingakhombisa ngokungaqondile ukwephulwa kwe-protein-lipid metabolism, okucasulayo ukuthuthukiswa kwe-pathology.
I-stherosing atherosulinosis yemithambo yobuchopho, inhliziyo noma isezingeni eliphansi kulula ukuyithola. Kulokhu, isiguli sinqunywe ukuhlolwa okuphelele, okubandakanya izinqubo ezilandelayo:
i-intravenous / arterial angiography yemithambo yegazi isebenzisa umehluko,
Ngokusekelwe emiphumeleni yokuhlolwa, udokotela angaqinisekisa ukutholwa kokuqala. Ngemuva kwalokhu, isiguli sinikezwa ukwelashwa.
Ukwelashwa kwe-stenosing atherosclerosis ikakhulukazi kuya ngokuthi yisiphi isigaba sokuthuthuka kwesifo isiguli esiya kudokotela. Esigabeni sokuqala, ngaphezu kwezokwelapha izidakamizwa, kuyadingeka ukuzama ukushintsha indlela yokuphila. Kubalulekile ukulahla imikhuba emibi, zama ukuphumula okwengeziwe. Ngaphandle kwalokho, ukuphuza umuthi kuzomane kunciphise ukuqhubeka kwesifo, kodwa ngeke sikuqede ngokuphelele.
Nakanjani, udokotela unquma isiguli ukudla (itafula No. 10), ocebile ekudleni kwezitshalo. Ngokuvamile kunconyelwa iziguli ezinomfutho wegazi ophakeme noma ukuhluleka kwenhliziyo. Uma unamathela ekudleni okunjalo, awukwazi ukunciphisa kuphela inani le-cholesterol elichithwayo, kodwa futhi ususe okweqile kwalo emzimbeni. Kulokhu, awukwazi ukuqhubeka nokudla ngokunciphisa umzimba. Umsoco kufanele ube olinganiselayo futhi ophelele. Ngaphandle kwalokho, ukwelashwa ngeke kulethe umphumela oyifunayo.
Iziguli ezinenkinga yokwelashwa kwe- "stenotic atherosclerosis of the low theities" kufanele zengezelwe ezemidlalo. Okuthandwayo kufanele kunikezwe ukuhamba kwe-Nordic noma ukubhukuda. Ezimpawu zokuqala zokukhathala emilenzeni, kufanele uphumule ngokushesha, ngaphandle kokulayisha kakhulu umzimba.
Ukwelashwa kwe-atherosclerosis akunakucatshangwa ngaphandle kokusetshenziswa kwemithi. Imvamisa, iziguli ezinalolu hlobo lokuxilonga zibekelwa amaqembu alandelayo emithi:
Abaphikisi. Vikela ukwakheka kweziqhekeza zegazi egazini.
Ama-antispasmodics. Thuthukisa ukuhamba kwegazi emzimbeni wonke.
Imithi yokuguqula izakhiwo zegazi ezijwayelekile. Okokuqala, kudonswa umuthi wesidakamizwa, bese kubekwa ifomu lethebhulethi.
Yonke imishanguzo yakhethwa isiguli ngasinye. Qiniseka ukuthi udokotela kumele acabangele isigaba sesifo kanye nesimo saso.
I-stenosing atherosclerosis esigabeni esithuthukile idinga ukuhlinzwa. Ukungenelela kokuhlinzwa kukuvumela ukuthi ubuyisele i-patency ejwayelekile yemithambo yegazi, susa ama-cholesterol plaque. Ngale njongo, ukushunqa, ukugcona noma i-angioplasty kwenziwa.Ukukhwabanisa okufakwe kuhlu kwenziwa ngendlela ye-endoscopic futhi evulekile kusetshenziswa i-anesthesia ejwayelekile.
Imiphumela yalesi sifo ingaba yimbi kakhulu futhi ibe yingozi empilweni. Isibonelo, i-stenotic atherosulinosis yemithambo yobuchopho ivame ukukhuthaza ukukhula kwesifo sohlangothi. Vele, le nkinga ayiveli nhlobo. Konke kuncike ezimfanelweni zomzimba, isisulu sokuvela kokugula. Ucwaningo lukhombisa ukuthi cishe bangama-70% abantu abangaphezu kwama-60 abakhalaza ngokukhombisa okuhlukahlukene kwe-atherosclerosis. Le pathology yiyona imbangela eyinhloko ye-brainhluleka syndrome.
I-stherosing atherosclerosis yemikhumbi yemikhawulo engezansi nayo ayihlali inesifo esihle. Uma i-artery ivinjiwe ngokuphelele, amathuba okukhula kwe-ischemic gangrene ayanda. Ikakhulu kaningi, i-pathology yenzeka kubantu abanesifo sikashukela, ngoba lesi sifo sisheshisa inqubo ye-stenosis.
Kuyadingeka ukuqala ukubandakanyeka ekuvinjelweni kwe-stenosing atherosclerosis kusukela ebuntwaneni. Bonke abantu abangenampilo basengozini yalesi sifo.
ukuhambisana nokubuswa komsebenzi nokuphumula.
Ungakhohlwa ngokudla okufanele. Ukudla kufanele ikakhulukazi kube nenyama engenamsoco nokudla kwasolwandle, kanye nokudla kwezitshalo.
Indlela yokuphila enempilo kusho ukuyeka umlutha. Kodwa-ke, kungcono ukuthi ungaqali ukubhema nokuphuza utshwala.
Izincomo ezifakwe kuhlu kufanele zibhekwe zombili ngesikhathi sokwelapha nangaphambi kwaso. Amathiphu anjalo angagwema izinkinga zesifo. Lapho kuvela izimpawu zokuqala, okubonisa ukuthi i-atherosclerosis ene-stenosing, kufanele uthintane nodokotela futhi uhlole imithambo yegazi. Uma kunesidingo, udokotela uzonikeza ukwelashwa okufanele.
Ukubonakaliswa kwemitholampilo kwe-stenosing atherossteosis kwenzeka ngokuncipha kokhilimu wemithambo emikhulu naphakathi nendawo ngesigamu esingaphezu kwesigamu. Imbangela yokuqala yalenqubo ukusungulwa kwezindawo ezixineneyo eziphansi kakhulu nezingaphansi kakhulu kwe-lipoprotein ekuxhumekeni okungaphakathi komkhumbi. Lapho sekuvele, i-cholesterol conglomerates iyakhula, ikhule endaweni yokugcotshwa ngamafutha iye ku-atherocalcinosis, kancane kancane inciphise ukuphuma kwegazi kwezicubu.
I-Cerebral atherossteosis (BCA, imithambo ye-carotid)
Amangqamuzana obuchopho asuthiswa ngohlelo lwe-brachiocephalic artery system (BCA). Lokhu kufaka phakathi isiqu se-brachiocephalic (kwesokudla i-carotid engakwesokudla ne-subclavian) kanye namagatsha angakwesokunxele kwegama elifanayo. Uma ukwakheka kwe-plaque kwenzeka kunoma iyiphi yazo (imvamisa endaweni ye-branching ye-carotid evamile), isiguli sitholakala sine-atherosclerosis ye-BCA.
Kungaba yi-non-stenotic kuphela ekuqaleni kwesigaba sokukhula, lapho ibala le-cholesterol libonakala khona umucu futhi lingafinyeleli kuhafu wobubanzi bomkhumbi. Cishe zonke lezi zinqubo zihamba nge-stenotic ngokuhamba kwesikhathi.
Izimpawu zokuqala zokuntuleka okunganele kokuhlinzeka kwegazi ziye ebuchosheni yilezi:
ukukhathala ngaphansi kwemithwalo ejwayelekile,
ukulala phakathi nosuku nokungalali ebusuku,
Njengoba i-ischemia ye-cerebral ischemia iqhubeka, ukugcinwa kanye nokuhlaziywa kwemininingwane kuyaphazamiseka, izinguquko zesizinda semizwa - iziguli ziba nomsindo, zisolise, zithambekele ekuphenduleni okuxakayo. I-tinnitus engaguquki, umbono ophazamisekile nokuzwa, i-shaky gait, nezandla eziqhaqhazelayo zibonisa ukwehla okuqhubekayo kokugeleza kwegazi.
Kulesi sigaba, kulahleka inzalo kunoma yiluphi uhlobo lomsebenzi, ukulahleka kwekhono lokusebenza ngempumelelo. Ukuqala kokuwohloka komqondo kuphawulwa ngokuduka okulandelayo:
inkulumo engekho emthethweni
ukunyamalala kwenzalo kwabanye,
ukulahleka kokuzinakekela nokuhlanzeka komuntu.
Izimpawu zokukhokhobala ezimeni ezinje yilezi ezilandelayo:
ukuphathwa ikhanda noma ukugabha,
ukulimazeka okuqhubekayo kokungazi - kusuka esimweni sokuduma kuya kokwethisa,
ukulahleka kwamandla okuhamba ngokuzimela emilenzeni,
Esikhathini esingapheli sokuqina kwe-stenosing atherossteosis ekuqaleni kwesiguli, isiguli siba nobuhlungu emisipha yomlenze lapho sihamba, ukuzindeka ngezikhathi ezithile nokwanda kokuzwa kwemilenze kubanda. Lapho ukukhanya kokwehla kwe-artery kushuba, izinhlungu ziba nomthwalo omncane, isikhumba siphuphutheke, bese kuba nombala obomvu okwe-cyanotic.
Izimpawu zokuncipha kwezikhathi ezithile zanda lapho kukhuphuka izitebhisi, ekuqaleni kwenzeka kuphela lapho uhamba amabanga amade, bese isiguli singakwazi ukuhamba ngisho namamitha angama-25 ngaphandle kokuma.
Ukuqunjelwa okukhulu kwe-atherosclerosis kanye nokuqhuma okukhulu kungaholela ekuqhekekeni komlenze kanye nesidingo sokunqunywa. Ukusongelwa kwengxaki enkulu kangako kufakazelwa izilonda ezinde ezingalapheki emlenzeni ongezansi, nokuqedwa kokudonsa komthambo onyaweni.
Ukuhamba kwegazi okwehlisiwe emithanjeni ye-coronary kubangela ukuhlaselwa kobuhlungu enhliziyweni - angina pectoris. Kubonakala ngokubonakala kwemizwa engemnandi ngemuva kwe-sternum ngesimo se-constriction, esivuthayo. Ukuqina kwesifo sezinhlungu kuyahlukahluka ngokusesilinganisweni kuya kokungabekezeleleki, izinhlungu zingasakazekela endaweni yamabade ehlombe, ingalo yangakwesokunxele, intamo. Ukuphazamiseka kwegazi okuhamba kancane kwe-coronary flow kuphawulwa ngemuva kokuzikhandla okukhulu ngokomzimba, ukucindezela, ebusuku.
Ngesikhathi sokuhlaselwa, kuba khona ukushoda komoya, izandla ezibandayo kanye nokubindeka, ishayela liba ngokungahambisani, ukuguquguquka komfutho wegazi kungenzeka. Ubuhlungu obuhlala isikhathi eside bungasho ukuthuthukiswa kokuhlaselwa yisifo senhliziyo. Phakathi kwezinkinga ze-angina pectoris ukufakwa kwesicubu esisebenzayo (i-cardiosulinosis) nokwanda kokuhluleka kwenhliziyo.
Bukela ividiyo ku-stenosing atherossteosis, izimpawu zayo nokwelashwa:
Ama-echo kanye nezinye izinkomba zokuba khona kwalesi sifo
Enye yezindlela zokuxilonga ezisiza ukutadisha ubunikazi bemikhumbi ye-arterial, ukuhlola izinga le-stenosis (unciphise) yi-echocardiography - i-ultrasound kwimodi yokuskena eyimpinda. Kuyasiza ukubona ukuba khona kwe-atherosulinotic plaque, ubukhulu bayo kanye nesilinganiso nobubanzi be-artery, ukuphazamiseka kokujikeleza esifundeni se-anatomical. Izimpawu zenqubo engeyona eye-stenotic yile:
ukutholwa kokufakwa kwe-cholesterol, okuhlala ngaphansi kwama-50% kokhanyo lomthambo,
ngenkathi i-plaque isesigabeni sokuqala sokubumba,
ukugeleza kwegazi okuyinhloko kuthambile buthaka.
Imininingwane ebalulekile ye-atherosulinosis yemithambo ye-coronary ingatholwa kusetshenziswa i-ECG - ekuphakameni kokuhlaselwa, ingxenye ye-ST iyancipha, bese kuthi-ke T kube yinto engemihle, isigqi kanye nokuphazamiseka kwe-conduction.
Ukushaya ngamandla okusheshayo ngemuva kokuhlaselwa kukhombisa i-angina pectoris, kanti evamile ikhombisa ifomu elizwelayo. Ukuxilongwa okuningiliziwe kwesimo sokujikeleza kwe-coronary kwenziwa kusetshenziswa ukuhlolwa kwengcindezi kanye nokuqapha nsuku zonke kwe-ECG.
I-Coronarography, i-angiography yemithambo ye-cerebral noma i-peripheral arriers isiza ngokuthembela okuphezulu ukubona ukuphazamiseka kokugeleza kwegazi, indawo yokuqhafaza futhi, okubaluleke kakhulu, yisimo sokudlula (izindlela ezihambisanayo) kanye ne-microcirculation kuma-capillaries. Kuphoqelekile ukuqoka ngaphambi kokuhlinzwa ukukhetha inqubo efanele. Ngaphezu kokulawulwa kwe-X-ray yakudala, kusetshenziswa i-MRI angiography.
Ukuxilongwa kwelabhoratri ye-atherosclerosis kubandakanya izifundo ezilandelayo:
ukuzimisela kwe-creatine phosphokinase, troponin, ALT ne-AST ezimweni zokusolwa kwe-myocardial infrasction.
Ukwelashwa kwe-stenosing atherosclerosis
Kungakhathaleki ukuthi iyini indawo ye-atherossteosis, kunikezwa ukudla okuyisipesheli ezigulini ezinokukhubazeka kwegazi cholesterol. Kukhawulela amafutha ezilwane, ukudla okusemathinini, umvimba, amasoseji eyenziwe ngezimboni, imajarini, ibhotela, imikhiqizo esezingeni eliphakeme. Imenyu kufanele ibe nenani elanele lemifino eluhlaza nobilisiwe, okusanhlamvu okuvela okusanhlamvu okugcwele, izithelo.
Ukulungisa ukwakheka kwegazi, izidakamizwa ezisebenza nge-lipid metabolism ziyasetshenziswa - Simgal, Lovastatin, Zokor, nicotinic acid.
Ngokuvimbela ukushwabana kwegazi, kunconywa i-Aspirin neTiklid. Isidingo sokugcina umfutho wegazi ojwayelekile noshukela wegazi.
Kwi-cerebral atherossteosis, ama-vasodilators (Cavinton, Nimotop), izidakamizwa zokuthuthukisa i-microcirculation (Agapurin, Curantil), izithasiselo ze-metabolic (Glycine, Bilobil), ne-nootropics ukwenza ngcono inkumbulo (Sermion, Lucetam, Somazina) nazo ziyasetshenziswa.
Uma kwenzeka kumonakalo emaphethelweni aphansi, ama-antispasmodics (Xanthinol nicotinate, Halidor), amavithamini e-B, angioprotectors (Vazaprostan, Calcium dobesylate) ayakhonjiswa, ama-novocaine blockades enziwa ukuze kutholakale izinhlungu, kanti iStreptokinase ilawulwa ngesikhathi sokuqhuma kwe-thrombus.
I-Nitroglycerin isetshenziselwa ukumisa ukuhlaselwa kwe-angina pectoris, ukwelashwa okuhlala isikhathi eside - ama-nitrate wesenzo eside (i-Isoket, iMonosan), iSidnofarm, i-beta-blockers (i-Concor, i-Anaprilin), i-calcium antagonists (Isoptin, i-Corfard retard), i-Preductal.
Esimweni lapho umuthi unganikanga umphumela olindelekile, kuyaqunywa nodaba lokwelashwa okuhlinzwa. I-plaque enengxenye yolwelwesi lwangaphakathi iyasuswa ngesikhathi se-endarterectomy, i-lumen of the artery is dilated with a balloon bese stent ifakwa, i-vein noma i-prosthesis iyahlunyelelwa esikhundleni sengxenye ethintekile, ibekwa ngemigwaqo (idlula lapho ihlinzwa).
I-Atherossteosis yisifo se-multifactorial. Izici eziningana zobungozi zingaholela kukho. Kwezokwelapha, yonke imbangela yezimbangela ihlukaniswe yilahleko. Ayisebenzi Lokhu kungaba yilezi zizathu ezilandelayo:
Ukuqalwa kwezakhi zofuzo noma ifa - kunengozi enkulu yokugula ezihlotsheni eziseduze, ngoba ukuthuthukiswa kwe-atherosulinosis kunqunywa kakhulu izici ezithile kuzinhlobo zofuzo,
Iminyaka yeziguli - iningi labantu liqala ukuqaphela izimpawu zokuqala ze-atherosclerosis ngemuva kweminyaka engama-40, ngoba yiziguli ezineminyaka ephakathi nendawo nabadala ezithinteka kakhulu kulokhu,
Ucansi - futhi lubamba iqhaza elibalulekile: abesifazane bathola i-atherosclerosis cishe kaningi kunabesilisa, futhi ekuqaleni kweminyaka okungenani eyi-10,
Ukubhema ugwayi - ababhemayo banengozi eyandayo yokuthola hhayi umdlavuza wamaphaphu nesifo sofuba kuphela, kodwa futhi ne-atherosclerosis enamandla kakhulu esezingeni eliphezulu ngayo yonke imiphumela elandelayo,
Izinkinga ezikhuluphele ziyisici sobungozi esingazinzile, ngoba ukunciphisa umzimba kwenzeka njalo, udinga kuphela futhi unesifiso,
Njengoba kunezinhlobo eziningi zama-lipids emzimbeni wethu, izinkinga nge-cholesterol zingahlotshaniswa nokuphulwa kokuqukethwe kwamanye ama-lipids, njenge-triglycerides kanye nama-chylomicrons,
Isifo sikashukela i-mellitus yisifo esibi ngayo yonke ingqondo. Ngokuhamba kwesikhathi, njengenye yezinkinga ezihambisana nalesi sikhathi, kukhula isifo sikashukela esisheshayo- ne-macroangiopathy - ukulimala kwemithambo yegazi emincane nemikhulu. Ngokwemvelo, lesi yisimo esihle sokubekwa kwamachibi cholesterol. Ngaphezu kwalokho, ngokuvamile abanesifo sikashukela futhi bakhuluphele ngokweqile (ikakhulukazi ngohlobo lwesibili sikashukela),
Ukushoda kwama-lipoprotein aphezulu kwabantu - i-cholesterol ehambisana nabo ibizwa ngokuthi "yinhle", futhi ayinangozi emzimbeni, kepha eyodwa ehambisana ne-lipoprotein ephansi nephansi kakhulu ayilusizo olukhulu. Ngakho-ke, ohlelweni lokwelashwa bafuna ukwandisa inani "elihle", futhi banciphise izinga le-cholesterol "embi",
I-Metabolic syndrome yigama elijwayelekile lokuboniswa okuningi, okubandakanya umfutho wegazi ophakeme (umfutho wegazi ophakeme), ukuvezwa komoya ngohlobo oluphakathi (iningi esiswini), ukunyuka kwama-triglycerides, noshukela wegazi ongazinzi (ukubekezelela okungahambi kahle).
Indlela yokuphila yokuhlala isikhathi eside - lokhu kunomthelela ekuzuzeni isisindo nokuqina ngokomzimba,
Ukudalulwa kwengcindezi engaguquki, izinguquko ezingokomzwelo.
Ngaphezu kwalokho, ukuhlukunyezwa kwanoma yiziphi iziphuzo eziqukethe utshwala kungaholela ekubukekeni kwe-pathology.
Ukwelashwa nokuvimbela i-stenosing atherossteosis
Ukwelashwa kwe-stenosing atherossteosis kubandakanya izinyathelo eziningana eziyisisekelo.
Izindlela zokwelashwa ezilandelanayo - zifaka ukusetshenziswa kwamaqembu akhethekile wemithi, njengama-statins, ama-fibrate, ama-sequence ama-anion exchange kanye namalungiselelo we-nicotinic acid. Ukuxhumanisa ukusetshenziswa kwabo yizinkinga zesibindi.
Ukusetshenziswa kwe-antispasmodics ukuqeda i-spasm yemithambo yegazi (papaverine, no-spa),
Ukuqokwa kwama-anticoagulants kanye nama-antiplatelet agents - le mishanguzo ijwayela ukugcwala kwegazi.
Ukudla kungenye yemisebenzi ebalulekile ekulweni ne-cholesterol. Kuyadingeka ukunciphisa noma ngisho nokukhipha ukudla okunokuqukethwe okuphezulu kwe-cholesterol ekudleni, yidla okunamafutha amancane, okuthosiwe, okubhemayo nokunosawoti. Esikhundleni salokho, kunconyelwa ukuthi kukhuliswe ukusetshenziswa kwemifino entsha nezithelo, amajikijolo, amakhambi, iklabishi, izaqathe, amantongomane, uwoyela wemifino, i-legumes, izinhlobo ezinamafutha aphansi enyama nenhlanzi, kanye nokudla kwasolwandle. Futhi kuzofanela unciphise kakhulu inani letiphuzo esimnandi, itiye elimnyama nekhofi,
Ukuzivocavoca umzimba kuyimpoqo - ikakhulukazi ekwelashweni ngokomzimba, ukuhamba nsuku zonke okungenani isigamu sehora, ngoba konke lokhu kusiza ukukhuthaza ukuhamba kwegazi nokukhipha amakhilogremu angeziwe,
Ukwelashwa kusetshenziswe kabanzi ngamakhambi abantu, ngokwesibonelo, ama-infusions okwelapha kanye nama-decoctions amakhambi angalungiswa kalula ekhaya,
Ezimweni ezisezingeni eliphakeme kakhulu, kusetshenziswa ukuhlinzwa (i-stenting, bypass surge).
Ukuvimbela i-stenosing atherossteosis isinyathelo esibaluleke kakhulu empilweni yabo bonke abantu abangafuni ukubhekana nale nkinga.
Okokuqala, kufanele unamathele ngempela ekudleni okuvela ku-cholesterol ephezulu futhi ungazami ukukusebenzisa ngokweqile ngokudla okuqukethe amafutha amaningi ezilwane ne-cholesterol. Kufanele futhi ubheke isisindo somzimba wakho, ngoba ukukhuluphala ngokweqile akukaze kusizakale - kungumthwalo owengeziwe ohlelweni lwezinhliziyo.
Kusukela eneminyaka engama-30, kufanele uhlole njalo i-cholesterol level yakho. Akubalulekanga kangako njalo, okungenani ukuzikhandla ngokomzimba omncane ukuze ulondoloze ithoni yemisipha.
Kuyelulekwa ukushiya imikhuba emibi noma okungenani uyinciphise, ngoba kuthinta kabi hhayi kuphela imikhumbi. Udinga futhi ukuphuza amavithamini amaqembu ahlukahlukene futhi ulandelele izinto ukuze uthuthukise ukungatheleleki ngokuphelele nokuvikelwa komzimba.
Yini i-stenotic atherossteosis ezotshela uchwepheshe kuvidiyo ekulesi sihloko.
Izimiso Zokuvimbela Nokwelashwa
Ukuvimbela ukwakheka kwama-plaque amasha nokunciphisa esele ekhona, basebenzisa ukudla nemithi, kepha ukwelashwa okuhlinzwa kuyadingeka ekwelapheni okusebenzayo kwe-stenosing atherosclerosis yemithambo yegazi. I-stenosis ebuhlungu ilungiswa kusetshenziswa i-stoving ye-endovascular noma i-bypass surge, kungakhathalekile ukuthi iyiphi inqubo ye-pathological.